Kilojoule Burning: izindlela ethandwa kakhulu
Ungakwazi ukunciphisa umzimba kuphela ezimweni zamandla kusilela. Beka umkhawulo amandla kuye kufinyelele emkhawulweni othile. Uma ekudleni kilojoule esingaphansi 600, uzizwa nokusebenza uzokwehla kakhulu. Ngisho iziboshwa zasemakamu okuhlushwa, ukuze asenze siphumelele, amaJalimane ecophelelayo wanika 600 kcal ngamunye amahora angu-24. Nokho, la mandla akukwazi isikhathi eside. Ngakho-ke, i-dieters ezinengqondo ngifuna ukuchitha kilojoule etholakala.
Burning kilojoule - inqubo akuyona njengoba nice njengoba ukusetshenziswa kwabo. Njengoba wazi, ukuncipha kunzima futhi singathandeki ukukhuphuka isisindo somzimba - lula futhi kumnandi. Nokho, awukwazi ukugxila imizwa engafanele kusukela ekudleni. Njalo uzizwe uphethwe yindlala, ulungise wena yokuthi ngalesi sikhathi igazi ithwala molecule amafutha ukondla kangakanani ezitokisini zabo. Yiqiniso, ukufezekisa lokhu akulula kangako, futhi une ukuya ukudla okunama-kilojoule amancane. Khona-ke kufanele uchithe kancane. Cabanga yezindlela ezingcono kakhulu ukuqinisekisa ukuthi ukushiswa kilojoule:
Indlela engcono kakhulu energy ukusetshenziswa - egijima, futhi kancane. Akufanele kuthambekele isikhathi futhi banqobe ibanga. Wabasaqalayo kuyoba okwanele 4 km ke ukusebenzisa lelo banga, kuzothatha cishe isigamu sehora. Ibanga ungakwazi ukukala ngu Yandex Maps, ne umsebenzi okhethekile. ukugijima suit kangcono - uma ungenalo isisindo esikhulu kakhulu ngokweqile kanye nenani elikhulu isikhathi khulula. Ukuze ashise nenani elilinganako kilojoule ngebhayisekili nge umfutho isilinganiso kuzodingeka basebenze ngesikhathi eside mayelana izikhathi 1.4. Noma yimuphi itafula ikhalori esivuthayo ukufakazela yona. Amanani ngokuphelele wokushisa kilojoule ngoba isisindo sakho phezu kwetafula kunzima ukunquma, ngaphandle-ke, asikho nesisindo ncamashi 70 kg, kuba etafuleni ngokuvamile ungenisa ngaphansi kwalesi sibalo.
Manje ake sixoxe ngebhayisikili. Uma uhlala enkabeni yedolobha, libhayisikili - hhayi lesikahle. Bambalwa abantu bathanda sifinyelele kwi curbs, futhi uma uyeka emkhawulweni ngamunye, kuyodingeka ukuchitha isikhathi esiningi. Ngaphezu kwalokho, hhayi yonke indawo ungakwazi ukushayela fast ngokwanele ukuba athatha kilojoule. Nokho, evutha kilojoule phezu ephelele ibhayisikili labo ehlanganyelwe noma emgogodleni sifo, ayivumeli ukugijima. Amandla ukusetshenziswa ngesithuthuthu ngempela eningi, nakuba ukugijima namanje kangcono.
A ehlukile okuhle ebaleka - ukuhamba. Ifanele cishe yonke kwenza umthwalo omkhulu phezu amadolo futhi ivumela ulahlekelwe isisindo ungcono ukugijima. Noma yimuphi ikhalori esivuthayo wokubala ukuze nazi ukuthi ukusetshenziswa ikhalori ukuze unqobe okufanayo ibanga lohambo futhi egijima amayunithi ezahlukene 20-50. Okungukuthi, ukuhamba nje njengoba nomphumela njengoba ukugijima, kodwa zidinga for umphumela ofanayo kabili isikhathi izindleko. Mina ngokwami, ngangikuthola, umlobi, wakwazi ukuphinde ahambe ngosizo amahora 5-6 ngosuku izinyanga 2 ukusho Some 25 kg. Against isizinda Ukudla, yebo, kodwa hhayi ukuhamba, ngangingahlali ngakho ngokushesha unciphile futhi abakwazanga ukuya ukusebenzisa.
Gym. Burning kilojoule akuyona enkulu kakhulu, kodwa kukhona omunye isici esibaluleke kakhulu - umzimba wakho iba isheshe. Isifundisa imisipha nomzimba wahlanganyela ukudla carbohydrate kakhulu, okusho ukuthi badle kungaba ngaphezulu. Futhi uma ungadli ngokushesha ngemva Amazing, umzimba wakho ngeke ngokushesha ufika amafutha asemzimbeni. Futhi nje evutha kilojoule, ngisho ngaphandle mthwalo ezingeni eliphakeme - ukuze indlela umzimba wethu.
Ukuvivinya umzimba ngendlela nobungqabavu. Kuphela efanelekayo kulabo kudingeka ulahlekelwe isisindo nokunye yazo zonke amakhilogremu 5. Running aerobics ngempumelelo ngokuya kumiswa ukukhuthazela. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukutshala ethile izingubo ezikhethekile. Ukufaneleka kuphumelela kuphela uma kanzima kakhulu qinisekisa ukuthi ukudla futhi wenze ne umfundisi wekilasi. Kodwa ngokuvamile, ngemali yawo umphumela akuyona esivuna lolu hlobo ikhalori ukusetshenziswa kwezimali.
Khetha ekugcineni kuwe. Isihloko iphatha kuphela ezinye izindlela ethandwa kakhulu. Kodwa kukhona karate, swimming pool nokudansa. Bheka into uyophumula umphefumulo.
Ukudla kwakusihlwa Ukudla: zokupheka ukuze yenza i e multivarka, ngezithombe
Ukunxanela Romanian nge dumbbells futhi barbell
Ukudla Ngempumelelo izinsuku 5. Okudla "5 kg izinsuku 5": ukubuyekezwa kanye Imiphumela
Indlela ukuqeda belly indoda futhi ukuthi lokhu kudinga
Izintatheli namanje abaqondi ukuthi Pugachev unciphile kwi Ducane Ukudla
Indlela ukubiza ngenyanga ngaphambi kwesikhathi ebesibekiwe?
Amavithamini impilo yethu: ukwakheka "Complivit", umthamo, izinkomba kanye contraindications ngoba ukusetshenziswa
BoomBody Gum: ukubuyekezwa. Ushingamu isisindo ukulahleka
Isidakamizwa esithi "Merz": izibuyekezo nezinhlelo zokusebenza
Amaqiniso ethakazelisayo nokuphila Nekrasov. Life kanye Works of Nikolaya Alekseevicha Nekrasova
Izinhlobo zokugeza ngenxa yokugezela encane
Patriotic "insipho opera" "Inkanyezi Inhliziyo": nabalingisi izindima
Indlela yokwenza embhedeni aphume amabhodi ngezandla zabo: imfundo, izinto
Cat ekhwehlela: Izimbangela Nemiphumela. Izifo Cats: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Ingqikithi isiko: kusondela main
Indlela Khulula Chest